Snapdragon cusub 888: Astaamaha iyo qeexitaannada | Androidsis
Snapdragon 888 horeyba waa rasmi wuxuuna u yimid awood badan dhamaadka-2021-ka
Chipset-ka ugu awoodda badan dhammaan nidaamka deegaanka ee Android ayaa halkan yaal, mid u imanaya inuu xukunka ka tuuro Snapdragon 865 -iyo kuwiisa Kala duwanaansho- sidii tii soo bandhigtay qaab ciyaareedkii ugu fiicnaa. Su'aasha, waxaan ka hadlaynaa Snapdragon 888, kaas oo la rabay in lagu soo bandhigo suuqa iyadoo la adeegsanayo magaca Snapdragon 875, laakiin sidaas ma noqon. Si la mid ah, kani wuxuu la yimaadaa kan ugu fiican kan ugu fiican inuu noqdo bahalka qalabeyn doona dhamaadka-sare iyo calanka laga bilaabo bishan iyo sanadka oo dhan 2021.
Qaybaha uu processor-kooda processor-ku aad u xoogga saaro inta badan, marka lagu daro waxqabadka guud ahaan, waa kuwa sawir, isku xirnaanta 5G iyo ciyaar. Sifooyinka ay leeyihiin waa kuwo layaableh, halkanna waxaan ku iftiimineynaa udub-dhexaadka processor-ka cusub oo aan si qoto dheer ugu faahfaahsanno xagga hoose, iyo waxyaabo kale.
Qualcomm Snapdragon 888 Tilmaamaha iyo Faahfaahinta Farsamada
Bilaabayaasha, qaybtaan cusub ama, sifiican loogu magac daray, madal moobiil wuxuu leeyahay xajmiga cabbirka 5 nm, taas oo ah halbeegga cusub ee aan sida xaqiiqada ah u arki doonno marar badan mustaqbalka waxqabadka sare iyo processor-rada wax ku oolka ah ee loo yaqaan 'chipset'. Qaabdhismeedkani wuxuu u oggolaanayaa isticmaalka tamarta aad uga hooseeya kan ay bixiyaan SoC-yada kale ee nanometer-yada sare, markaa madax-bannaanida ayaa si togan u saamaysa. Tani waxay sidoo kale saameyneysaa cabbirka processor-ka, oo yar, iyo xawaaraha gudbinta xogta, taas oo ka sarreysa.
In yar oo ka walaacsan, waxqabadka iyo waxtarka tamarta ayaa ka sarreeya 25%, marka la barbar dhigo Chipset-kii kale ee ka horreeyay ee Qualcomm. Tani waxay sidoo kale sabab u tahay qaabeynta aasaasiga ah ee CPU-ku faano, oo loo qaybiyay saddex qaybood waana sidan soo socota:
A Cortex X1 core wuxuu ku xiran yahay 2.84 GHz iyo 1 MB oo ah kaydinta L2.
Saddex xudun oo loo yaqaan 'Cortex A78' ayaa lagu dhejiyay 2.4 GHz oo leh 512 KB oo ah L2 cache (midkiiba).
Quad Cortex A55 cores wuxuu ku xiran yahay 1.8 GHz oo leh 128 KB oo ah L2 cache (midkiiba).
Tan tan waa inaan sidoo kale ku darnaa 4 MB oo ah L3 khasnado la wadaago, marka laga reebo 3 MB ee keydka processor-ka ee u gaarka ah nidaamka.
Dhismaha Snapdragon 888
Dhinaca kale, marka loo eego GPU Adreno 660, oo ah mashiinka sawirada ee Snapdragon 888, Qualcomm ayaa leh ayaa ilaa 35% ka dhakhso badan kii ka horreeyay ee SoC GPUs waxayna baabi'isaa 20% awood ka yar, kaas oo waliba ka caawiya ismaamulka inuusan dhulka soo dhaafin. Haddii aan ku darno tan in soo-saaraha semiconductor-ka uu siin doono casriyeyn xilliyeed iyo madax-bannaan processor-ka, waxaan ogaaneynaa inaan wajaheyno GPU waxyaabo badan oo aan bixinno, iyo muddo dheer.
Sidii ay ugu dhacday Snapdragon 765G - oo aan ku dhicin Snapdragon 865-, cusub ee Snapdragon 888 ayaa la socda modem isku dhafan oo 5G ah, sidaas darteed taleefan kasta oo casri ah oo xambaarsan waxay la jaan qaadi doontaa shabakadaha 5G adduunka. Snapdragon X60 5G waa modemka doorashada noocaas ah, midna dabcan, wuxuu la jaan qaadayaa 2G, 3G iyo 4G LTE shabakadaha, iyo waliba bedelida isku xirnaanta horumarsan sida Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E iyo Bluetooth 5.2.
Mashiinka AI ee Snapdragon 888 ayaa la magacaabay Hexagon 780, waana qaybta mas'uulka ka ah ka caawinta inay si habsami leh ugu socoto dhammaan howlaha iyo geeddi-socodka la xiriira Sirdoonka Cilmiga ah, soo bandhigidda iyo in ka badan. Waxay socodsiin kartaa ilaa 26 hawlgal tera ilbiriqsi kasta, taas oo ah wax laga xumaado marka loo eego waxqabadka waxayna sameysaa jees jees ah oo ku saabsan 15ka hawlgal ee tera ilbiriqsi kasta ee ay Snapdragon 865 gaari karto. Soosaarka ayaa yar, sida ay sheegtay Qualcomm.
Iyada oo ku saleysan sawir qaadista, taas oo ah mid ka mid ah qodobbada sida aadka ah noo wada xiisaynaya, waxaan haynaa warar weyn oo mudan in la muujiyo. Iyada oo leh barnaamijkan moobiilka ah, 8K xalinta fiidiyowga duubista horay ayaa loo dhigay si caadi ah, taas oo aan hore u aragnay iyada oo laga hirgaliyay qaar ka mid ah taleefannada gacanta sare sannadkan. Duubista fiidiyowga ee 4K, dhinaca kale, ayaa si gaar ah u fiican, maadaama lagu hirgelin karo HDR isla mar ahaantaana looga mahadcelinayo ISP (sawir-qaadaha) Spectra 580 ee Snapdragon 888.
Halkan sidoo kale Duubista fiidiyowga ee xallinta 4K waxaa lagu xoojiyay 120 wareeg halkii labaad, wax aan sidoo kale horay u aragnay, laakiin hadda ballanqaaday inuu fiicnaanayo oo xasilloon yahay iyada oo loo mahadcelinayo faa'iidooyinka moobiilka iyo ISP Spectra 580. Waxay noqon doontaa mid aad u xiiso badan in la arko sida astaamahan oo dhan iyo hagaajintu u saameynayaan ku dhaqanka marka qaadashada sawirro, oo aan dhowaan daahfuri doonno.
Qeybta ciyaaraha, waxaa jira iswaafajin heerar sare oo cusbooneysiin ah oo gaaraya illaa 144 Hz, wax si gaar ah muhiim ugu ah cayaaraha royale dagaalka, in kasta oo aysan weli jirin cid ku shaqeyn karta sicirkan cusboonaysiinta, laakiin hubaal in kabadan hal ayaa heli doona cusbooneysiin ah Faa'iidada waxqabadka processor-ka waxayna siisaa waayo-aragnimo ciyaar wanaagsan. Sidoo kale dhibaatooyinka kale qaarkood sida daahitaanka iyo ka jawaab celinta taabashada ayaa la xaliyay; halkan waxaan ku iftiimineynaa taas jawaabta taabashada ah waxay horumarin doontaa 10% ciyaaraha 120fps, 15% 90fps games, iyo 20% 60fps games.
Dhinaca kale, Snapdragon 888 wuxuu kaloo leeyahay processor-kiisa amniga oo u gaar ah, sida uu sheegayo soo-saaraha, wuxuu la socon doonaa asturnaanta iyo amniga mar walba, si loogu bixiyo sir-xad-dhaaf xad-dhaafka ah ee badbaadada isticmaalaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Snapdragon 888 horeyba waa rasmi wuxuuna u yimid awood badan dhamaadka-2021-ka
Disney iyo Vodafone waxay ku biiraan xooggooda si loo abuuro Neo, smartwatch-ka carruurta